अन्डाको अनेक गुण छन् । यो आफैमा स्वादिलो परिकार हो । अन्डालाई अन्य परिकारमा पनि सामेल गर्न सकिन्छ । त्यस्तै यसलाई सौन्दर्य प्रसाधनको रुपमा समेत प्रयोग गरिन्छ । केसलाई मुलायम बनाउनेदेखि छालालाई चम्किलो बनाउनसम्म अन्डा उपयोगी मानिन्छ । अन्डा प्रयोग गरेपछि त्यसको बोक्रा के गर्ने ? : यसको पनि अनेक …
बिहान–बिहानै खाली पेटमा चिया पिउने बानी धेरैजसोको हुन्छ । तर, खाली पेटमा चिया पिउँनाले एसिडिटी हुनसक्छ । किनकि यसमा भएको टेनिन्स पेटको एसिडलाई बढाई दिन्छ । थाहा पाउनुहोस्, खाली पेटमा चिया पिउँनाले के–कस्ता गम्भिर रोग लाग्छन् । १. प्रोस्टेट क्यान्सर – खाली पेटमा चिया पिउनाले पुरुषलाई प्रोस्टेट अर्थात ग्रन्थीसम्बन्धी रोग …
काठमाडौँ – मुख हाम्रो शरीरको मुख्य ढोकाजस्तै हो। मुखलाई सफा र स्वच्छ राख्यो भने स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। दाँत जीब्रो गिजालाई सफा र स्वस्थ राख्न आवश्यक छ। दाँतमा लाग्ने रोग दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा दाँतमा किरा लाग्ने हो भने अर्को गिजामा समस्या आउने हो। हामीले खाएको खानेकुरा दाँतको वरिपरि टासिन्छ, …
अण्डा हाम्रो स्वास्थ्यको लागी निकै फाइदाजनक छ । प्रोटिन, भिटामिन लगायत बिभिन्न खनिज पदार्थ पाइने अण्डाले हामिले नसोचेको फाइदा गर्छ । एउटा सिङ्गै अण्डामा पाइने आधाभन्दा बढी प्रोटिन यसको सेतो भागमा पाइन्छ । अण्डाको सेतो भागमा सेलेनियम, भिटामिन ’डी’, भिटामिन ’बी ६’, भिटामिन ’बी १२’, जिंक, आइरन पाइन्छ भने पहेलो …
बालबालिकाको उपचारमा कहिलेकाही जटिल अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई डाक्टर र नर्सको चौबिसै घण्टा प्रत्यक्ष निगरानी आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थाका बालबालिकालाई राखेर उपचार गरिने कक्षलाई बाल उपचार सघन कक्ष अर्थात पिआइसियु भनिन्छ । सामान्यतया पिआइसियुमा अलि गम्भीर अवस्थाका बिरामी बच्चालाई राखिन्छ । पिआइसियुमा दुई महिनादेखि १५ वर्ष …
हाम्रो घाँटी सुख्खा हुँदा र दुख्दा सबैभन्दा पहिला हामी पानी पिउछौँ । पानी पिउँदा घाँटी चिसो हुन्छ र मनतातो पानीले त थुप्रै समस्या कम पनि हुन्छ । तर धेरैलाई पानी खाइसकेपछि पनि घाँटी सुकिरहने समस्या हुनसक्छ । घाँटी बारम्बार सुकिरहन्छ भने बान्ता आउने, रिँगटा लाग्नेजस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । …
May 27, 2022 स्वास्थ्य 0
काठमाडौ । के तपाई राति भोकै सुत्नुहुन्छ? त्यसो भए ख्याल गर्नुहोस। रातको खानाले हाम्रो शरीरको प्रणालीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यदि हामीले यसलाई बेवास्ता गर्यौं भने हामीले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ र निद्रामा पनि गडबड हुन सक्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो दैनिक काम गर्नमा पनि त्यति …